Water Soluble – Moe Ah San
10% Fosfomycin + 2.5% Trimethoprim
(၁) ကြက်တွင် အဖြစ်အများဆုံး (Gr -) ရောဂါပိုးမှာ (Ecoli) ဖြစ်ပြီး
(Gr +) ပိုးမှာ (Staphylococcus) ဘက်တီးရီးယားများဖြစ်၏။
(၂) ထိုပိုး နှစ်မျိုးလုံးမှာ "ဆေးယဉ်၊ ဆေးမတိုး၊ ကုရခက်" စာရင်းဝင် (Super Bugs) အဆင့် ရန်သူပိုးများဖြစ်၏။
(၃) "LHIFOSTRIM" မှာ အထက်ပါ ပိုးနှစ်မျိုးလုံးကို နလံမထူနိုင်အောင် နှိပ်ကွပ်ချေမှုန်းပေးမည့် "အားအကိုးရဆုံး" ဆေးဖြစ်၏။
(၄) "FOS" ၏ အစွမ်းဖြင့် ဘက်တီးရီးယား ဆဲလ်နံရံကို ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးပြီး "TMTP" တို့က cell အတွင်းပိုင်းရှိ (DNA မျိုးရိုးဗီဇဆဲလ်) များအထိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် ဟန့်တားခြင်းနည်းဟန် (၂)မျိုး၏ ပူးပေါင်းထိုးနှက်ချက် (Synergy) ကို ရယူအသုံးချထားခြင်းဖြစ်၏။
(၅) "TMPT" ၏ ပိုးပွားနှုန်းကန့်သက် (Static Effect) နှင့် "FOS" ၏
ပိုးအသေသတ် (Cidal Effect) တို့၏ ပူးတွဲသက်ရောက်မှုကြောင့် ပိုးဆိုးများကို
လွတ်လမ်းမရှိအောင် ထိရောက်ထက်မြတ်စွာ သုတ်သင်နိုင်ခြင်းဖြစ်၏။
(၆) "FOS" ၏ အခြား Antibodies များထက် ထူးခြားသောစွမ်းရည်မှာ "Biofilm" ခေါ်
ရေပိုက်ခေါင်း အကျိအချွဲများအတွင်း ခိုအောင်းနေသည့် "Ecoli" အပါအဝင်
Pathogens များကိုပင် အလွတ်မပေးပဲ နှိပ်ကွပ်နိုင်စွမ်းပင်ဖြစ်သည်။
(0.5 - 1 ml)/Lit water ဆေး (၃-၅)ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
ထုတ်ပိုးပုံ - ၁ လီတာ
ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ - EL Salvador
Doxcine 500 WSP
ရေဖျော်အစာစပ် ၂မျိုးစလုံး သုံးနိုင်သော Doxycycline ဆေးမှုန့်
Doxycycline (hyclate) 500 mg နှင့် Excipient q.s.p တို့ပါဝင်သည်။
(၁) (CRD) ကုသရာ၌ "Tylosin, Tilmicosin" တို့ကိုယှဉ်နိုင်သောအစွမ်းသတ္တိကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဆေးဖိုးစရိတ် သက်သာစေသည့် "ဂုဏ်" ပိုမိုပါသည်။
(၂) ဆီ၌ ပျော်ဝင်နိုင်ခြင်း၊ အူနံရံမှ စုပ်ယူနှုန်းမြင့်မားသော်လည်း စွန့်ထုတ်နှုန်း နှေးကွေးခြင်း၊ အသည်း ကျောက်ကပ် တို့အား ဆိုးကျိုးထိခိုက်မှုနည်းပါးခြင်းနှင့် ပိုးပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ပိုးမွှားများကို အသေသတ်နိုင်စွမ်း (Static & Cidal effect) ၂ မျိုးလုံးပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဖြစ်၍ ဆေးစွမ်းထက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
(၃) အခြားဆေးဝါးများနှင့် ပူးတွဲသုံးစွဲပါက တွဲဖက်သုံးဆေး၏ dose level ကို
ရေတွင် - 10-12 mg Doxycycline/Kg Body Wt. (3-5) days
အစာတွင် - 200g (Doxiciclina 500)/Ton of Feed for Poultry.
500g (Doxiclina 500)/Ton of Feed for Pigs for 7days.
ထုတ်ပိုးပုံ - ၁ ကီလိုဂရမ်
Alkyl benzyl dimethyl ammonium Chloride 10% w/v ပါဝင်သည်။
- Bacteria ပိုးများကို သုတ်သင်ရန်။
- ဆေးစိမ်ပြီးအရာဝတ္ထုများ ရေထပ်ဆေးဖို့မလိုပါ။
- ခြေဆေးကန်၌လည်း သုံးနိုင်သည်။
(က) အထွေထွေပိုးသတ်ခြင်းအတွက် ဆေး (၁)လီတာ + ရေ (၅၀ဝ)လီတာ
(ခ) ခြေဆေးကန်၊ ခြံဆေးဖျန်း ဆေး (၁)လီတာ + ရေ (၂၅၀)လီတာ
ထုတ်ပိုးပုံ - ၅၀ဝ မီလီလီတာ၊ ၅ လီတာ နှင့် ၂၀ လီတာ
ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ - Thailand
Glutaraldehyde 15% w/v နှင့် Alkyl benzyl dimethyl ammonium Chloride 10% w/v တို့ပါဝင်သည်။
- Bacteria အပြင် Virus ပိုးမွှားများကိုလည်း သုတ်သင်ရန်။
- ဆေးစိမ်ဆေးဖျန်းပြီးနောက် ရေဖြင့်စင်ကြယ်စွာ ဆေးရမည်။
- ခြေဆေးကန်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
(က) အထွေထွေပိုးသတ်ခြင်းအတွက် ဆေး (၁) လီတာ + ရေ (၄၀၀) လီတာ
(ခ) ခြေဆေးကန်၊ခြံဆေးဖျန်း ဆေး (၁) လီတာ + ရေ (၃၀၀) လီတာ
ထုတ်ပိုးပုံ - ၁လီတာ ၊ ၂၀ လီတာ
Vitamin A 5,000,000.00 I.U
Vitamin D3 900,000.00 I.U
Vitamin E 1,500.00 I.U
Vitamin K3 0.60 gm
Vitamin B1 0.20 gm
* ဗီတာမင် ချို့တဲ့ခြင်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
* ကြီးထွားနှုန်းနှင့် ဥနှုန်းကောင်းခြင်း
* ရာသီဥတုဒဏ်၊ ကာကွယ်ဆေးဒဏ်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်မှုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း
* အစာစားနှုန်းကျခြင်း၊ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
၁. အသားစားကြက်၊ ဥစားကြက်၊ အသားစားဘဲ၊ ဥစားဘဲ- ရေ (၁) ဂါလံလျှင် ဆေး (၃) ဂရမ်
၂. ဝက်ငယ်၊ ဝက်လတ်၊ ဝက်ကြီး၊ မျိုးဝက် - ရေ (၁) ဂါလံလျှင် ဆေး (၃) ဂရမ်
ထုတ်ပိုးပုံ - 1 kg Sachet & 12 kg Plastic Drum (1 kg x 12)
ဆေး ၁ မီလီလီတာတွင် Toltrazuril 25mg ပါဝင်သည်။
(၁) သွေးဝမ်းရောဂါ (ပိုးသတ်) ကုသဆေး (Coccidiocide) အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အစာ၌ သွေးဝမ်းကာကွယ်ဆေး (Coccidiostatis) ပါဝင်မှုနှင့် နှုန်းထားပြည့်ဝမှု မသေချာပါက (၂)ပတ်သားအယ်၌ ဤဆေးဖြင့် သွေးဝမ်းပိုးကို အပြတ်ရှင်းခြင်းဖြင့် (Broiler များ၌အလွန်အဖြစ်များသော) (NE) ခေါ် အူရောင်နာရောဂါကို ကြိုတင်ဟန့်တားနိုင်ပါသည်။
ဆေး ၁ စီစီ/လီတာ နှုန်းဖြင့် (၂) ရက်ဆက်တိုက်ရန်
ထုတ်ပိုးပုံ - ၁ လီတာဘူး
Doxiciclina 500 Ganadexil
ထုတ်ပိုးပုံ - ၅၀၀ ဂရမ် ၊ ၁ ကီလိုဂရမ်
ဆေး ၁ ကီလိုဂရမ်တွင် Colistin Sulfate equivalent to Colistin base 500 g ပါဝင်သည်။
(၁) Gram (-) ပိုးဆိုး (Ecoli-salmonella) တို့ကို သတ်နိုင်စွမ်းသော (Narrow spectrum) ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်၍ ရောဂါရှာဖွေမှုသေချာလျင် အစွမ်းထက်မှုလုံးဝသေချာပါသည်။
(၂) (Doxy + Colistin) နှင့် (Linco + Colistin) ဆေးအတွဲများ၏ အစွမ်းထက်မှုကို သံသယကင်းစွာ ရွေးချယ် သုံးစွဲသင့်ပါသည်။
(၃) Gl mucosa မှ စုပ်ယူမှုမရှိသော (Gut Active) အူလမ်းကြောင်းသီးသန့်
ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်၍ systemic effect မရနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ဆေး 1 gm/ 75 Kg body weight နှုန်းဖြင့် တိုက်ရန်။
ထုတ်ပိုးပုံ - ၁၀ဝ ဂရမ်၊ ၁ ကီလိုဂရမ်
Oral solution for calves, pigs, broiler chickens
Sulfadiazine 200 mg, Trimethoprim 40 mg နှင့် Excipient 1 ml တို့ပါဝင်သည်။
(၁) အစာလမ်းကြောင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ မျိုးပွားနှင့် ဆီးလမ်းကြောင်းနှင့် ဦးနှောက် အာရုံကြောစနစ်များ တွင်ဖြစ်သော ရောဂါများကုသရန်။
(၂) အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ် အားဖြည့်ဆေး (Hepato renal protectant) အရံ အားဆေး
တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ကြိုတင်၍သော်လည်းကောင်း၊ နောက်မှလိုက်၍သော်လည်းကောင်း
ကြက် - (ဝ.၅) ဂရမ်/လီတာ သောက်ရေ၌ (၃ - ၅) ရက်
ဝက်၊ နွား - (၁) ဂရမ်/၁၀ ကီလိုဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် (၃ - ၅) ရက်
(တွက်ချက်ရရှိသော ဆေးပမာဏကို (၂) ကြိမ်ခွဲ၍ တိုက်ကျွေးပါ။
ထုတ်ပိုးပုံ - ၁လီတာဘူး
ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ - Italy
(A Broad Spectrum Antibiotic )
ဆေး ၁ မီလီလီတာတွင် Tilmicosin 250 mg ပါဝင်သည်။
Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida
အဖြစ်အများဆုံး "Mycoplasmosis" အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါ (MG-MS) တို့အတွက် အထိရောက်ဆုံး ကုသဆေးဟု အများလက္ခံထားပြီးဖြစ်သော (Tylosin) ဆေးကို နောက်တဆင့် ထပ်မြှင့်ထားသည့် နောက်ဆုံးပေါ် (CRD) သုတ်သင်ဆေးဖြစ်ပါသည်။
ကြက် - 30 ml/100 lits water for 3-5 days (or)
15 ml/kg BW/day for 3-5 days
ထုတ်ပိုးပုံ - ၂၄၀စီစီ